Copyright ©2022 National Museum Yangon
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ပစ္စည်းများနှင့် မှတ်တမ်းများ
Cheque Book ချက်လက်မှတ် စာအုပ်
RN 032876 မှ 032900 ထိ ပါသော ချက်လက်မှတ်(၁)အုပ်နှင့် ပေးပို့သော စာရွက်(၁) စောင် No. RN 032876 နှင့် RN 032877 (၂) ရွက်မပါ
Box of Matches မီးခြစ်ဆံဘူး (တယောတံဆိပ်ပါ)
အထဲတွင် သစ်သားမီးခြစ်ဆံ (၃၆) ချောင်းပါသည်။ ဘူးတွင်တယောတံဆိပ်ပါသည်။
Packet contents unknown အမည်မသိပါရှိသောပစ္စည်း/အထုပ်
ခဲတံနှင့်ရေးသားထားသောမြန်မာဘာသာစာရွက်(၂)ရွက် မင်နှင့်​ရေးထားသောမြန်မာဘာသာ(၁)ရွက် အင်္ဂလိပ်လို မင်နှင့်ရေးထားသော(၂)ရွက် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ဖဆပလအမတ်များကျင့်သုံးလိုက်နာ ရန်စည်းမျဉ်းများ(၁-၄)ရွက် အမှတ်စဉ်(၁)မှ (၂၁)ထိရှိသည်။ ပလပ်စတစ်လောင်းထားသောစာရွက်(၃)ရွက်
Packet contents unknown အမည်မသိ ပါရှိသော ပစ္စည်း/အထုပ်
Packet said to contain R.S 54/- ပိုက်ဆံများ
၅ ကျပ်တန် (၉) ရွက် P14 857121, P28 696840, P28 909312, N26 977571, P30 009581, R24 023934, P12 542418, R28 948219, R24 023920 ၁ ကျပ်တန် (၉) ရွက် K43 787504, ----708501, K43 787266, E65 242370, E65 798584, K43 668822, K43 787186, K46 004663, E66 032684
Pair Spectacles မျက်မှန်
အပိုင်းအစများ (မျက်မှန်ကိုင်းအကျိုး) ၊ မှန် (၂) ခု၊ သတ္တုချောင်းအတို(၃)ချောင်း၊ အရှည် (၂) ချောင်း
Signet ring တံဆိပ်တုံးလက်စွပ်
သတ္တုနှင့်ပြုလုပ်ထားသောအမဲရောင်မီးခြစ် (Delite England စာသားပါ)
Oris Wrist Watch လက်ပတ်နာရီ
နာရီကြိုး(၂)ဖက်တွင် PAT PENDING REG No 843679 ပါရှိသည်၊ နာရီဒိုင်ခွက်အတွင်းတွင် ORIS WATER PROOF MADE SWISS ပါရှိသည်။
Cigarette Case စီးကရက်ဘူး
Blue Book အပြာရောင်စာအုပ်
Hindi (or) Arabi ဘာသာရေးထားသော စာအုပ် တစ်အုပ် ၊ အရွက်(၁၁၇)ရွက်ပါသည်
packet said to contain R.S 36/- ပိုက်ဆံများ
D69 346390, C84 758575, D74 500148 (၁၀ကျပ်တန်၃ရွက်) P37 618089 (၅ကျပ်တန် ၁ ရွက်), E65 180916 (၁ကျပ်တန် ၁ ရွက်)
Cloth Roll လက်ကိုင်ပုဝါ
အဖြူရောင်လက်ကိုင်ပုဝါ ၊ အမဲရောင်မီးပေါက်ရာ(၃)ခုပါရှိသည်။
မျက်မှန်ကိုင်းအကျိုး (၂) ခု ၊ မှန် (၂) ခု
Parker 51 Pen ပတ်ကားဖောင်တိန်
မီးခိုးရောင်၊ အပိုင်း(၃)ပိုင်း ကျိုးနေသည်။ အဖုံးရွှေရောင်
Packet said to contain R.S-16/- ပိုက်ဆံများ
Q36 957430 (၁၀) ကျပ်တန် R28 949164 (၅) ကျပ်တန် No. မထင်ရှားပါ (၁)ကျပ်တန်
အထဲတွင် စီးကရက် (၇) လိပ်ပါသည် (အမဲရောင်ဘူး)
Packet contents unknown မန်းဘခိုင် လက်မှတ်ပါ စာရွက်
အဖြူရောင်လက်ကိုင်ပုဝါတွင် B.K ဟုချည်အနီရောင်နှင့်ထိုးထားသည်။
Packet Content unknown R.S-30/- ပိုက်ဆံများ
၁၀ကျပ်တန်(၃)ရွက် D71 951180, D71 118935, D73 268759
Wrist Watch နာရီ
Packet contents unknown စာရွက်
ဦးအုန်းမောင်သို့လိပ်မူထားသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် စာရွက်တစ်ရွက်
Spectacle Frame မျက်မှန်ကိုင်း
အနားအစိမ်းရောင်အစင်းကျားပါ ပိုးလက်ကိုင်ပုဝါ (သွေးစွန်းကွက်များပါရှိသည်)
ထို့ပြင် တိကျစွာပိုင်ရှင်အမည်ထင်ရှားခဲ့တာကတော့ RZ ဟုအမည်ရေးထားသောကျောက်မဲတစ်လုံးပါသော ဦးရာဇတ်၏ တံဆိပ်တုံးလက်စွပ်တစ်ကွင်းနှင့် Hindi (သို့မဟုတ် ) Arabi ဘာသာဖြင့်ရေးထားသော မွတ်စလင်ဘာသာဝင်များ၏ အပြာရောင် ကျမ်းစာ စာအုပ်နှင့်အတူ ဦးရာဇတ်၏ လိပ်စာကပ်များတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ RZ ဟုရေးသားထားသောတံဆိပ်တုံးလက်စွပ်မှာ ဦးရာဇတ်၏ သားမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လက်စွပ်အားလာရောက်ကြည့်ရှုပြီး သူ၏ဖခင်၏တံဆိပ်တုံး လက်စွပ်ဖြစ်ပါကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သောကြောင့် ဦးရာဇတ်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ဆင်ခဲ့သော လက်စွပ်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။